Ajax oo dhulka ku jiiday Real Madrid ee Garonkeeda Bernebeu si ay u gaarto quarter-final-ka Champions League – Walaal24 Newss
March 6, 2019	3	By walaal24
Los Blancos, iyadoo kabtanka Sergio Ramos uu ganaax ku maqnaa ka dib markii uu si ula kac ah u qaatay jaalihiisii ​​jaalaha ee lugta hore, waxa uu raadinayay in uu guul ka gaarot Ajax, markii 2-1 oo uu ka soo ciyaaray Amsterdam, islamarkaana uu ku sii jirayo tartanka afaraad oo isku xigta.
Kooxda Real Madrid ayaa ka dhacday Champions League, iyadoo Ajax ay 4-1 ku garaacday Garoonka Santiago Bernabeu si ay u gaarto wareega 8da
Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii Raphael Varane madaxa loo taagay Ajax ayaa Goolkii hogaanka u dhaliyay H. Ziyech markii uu baas ka helay Dusan Tadic daqiiqadii 7aad, Goolkii labaad waxaa u dhaliyay David Neres daqiiqadii 18aad, balooni uu ka helay Dusan Tadic.
Real Madrid ayaa lagu qasbay inay labo isbedel ku badiso markii Lucas Vazquez ayaa dhaawac ku soo gaaray, ayaa Gareth Bale uu bedelay qeybtii hore ee ciyaarta ku soogalay daqiiqadii 29aad, waxaa dhaawac Garoonka looga saaray Vinicius Junior daqiiqadii 35aad, waxaana bedel ku soo galay Marco Asensio.
Ajax ayaa isha ku heysay inay shabaqa soo taabato markii Tadic uu goolka seddexaad dhaliyey ka dib daqiiqadii 62aad – taasoo ku bada u muuqatay iney riigada Goroonka ay ka baxday (fooro) intaa ka dib ayaa taageeraha fiidiyoowga ah ee Taageerada Garsooraha si loo hubiyo in kubada ay ka baxday ciyaarta.
Lasse Schone, inkastoo uu habeenkii xalay ahaa gool qurux badan u dhaliyey kooxda Erik Ten Hag, markii uu kubad laad xor ah u dhiibay Thibaut Courtois 72 daqiiqo.
Real ayaa ku dhameysatay 10 ciyaaryahan ka dib markii Nacho ayaa qaadatay labo Jaale deg deg ah, qalad uu ku galay Cayaaryahan gadaalna ka raacay, sidaasna Garoonka looga saaray.
Guuldaradan ayaa ah midkii afaraad oo isku xigta ee Los Blancos looga adkaado, ka dib markii ay garaaceen kooxda ay xafiiltamaan Barcelona ee LaLiga Sabtida, waxaana ay arki doonaan cadaadiska saaran tababaraha Santiago Solari.
Ajax, ayaa sidoo kale sii wadi doonta inay gaarto wareega quarter-finalka Champions League markii ugu horeysay tan iyo 2003dii.
Madaxweynaha Jabuuti oo soo gabagabeeyay boqashadii uu ku joogay magaalada Muqdisho
Mucaaradka Maldives oo sheegtay guusha tartanka madaxtinimo ee Dalkaasi
Taliska Mareykanka oo duqeyn Diyaaradeed ka geystay Gobolka Shabaalaha Hoose
Daawo: Doontii soo caridey oo ku socoto dejinta kana hadlay God.Gudiga Dhismaha marsada cusub ee Boosaaso